४४ लाख डोज खोप चीनबाट आइसक्यो, को-को छन् प्राथमिकतामा ? -
बद्री पाण्डेको सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
घनश्याम भूसालले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए
ओलीको उम्मेदवारी एमाले अध्यक्षमा , रावलसँग प्रतिस्पर्धा हुने
प्रचण्ड : न्यायालयको समस्या समाधानका लागि गठबन्धन तयार छ
पुष्पकमल दाहाल: ऋण र अनुदान सहयोग अमेरिकासँग नलिने भन्ने कुरै हुँदैन
नागरिकको सहजताका लागि ललितपुर महानगरको अर्को सह्रानीय काम ललितपुर महानगरमा दैनिक कोभिशिल्ड ...
ललितपुर महानगरको सह्रनीय काम(with Video)
ललितपुरको एमाले महानगर कमिटीमा महिला नेतृत्व, मञ्जली शाक्य विजयी
Home›देश›४४ लाख डोज खोप चीनबाट आइसक्यो, को-को छन् प्राथमिकतामा ?
सरकारले चीन सरकारसँग खरिद गरेको थप ४४ लाख मात्रा भेरोसेल खोप शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज मार्फत् उक्त मात्राको खोप शुक्रबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको हो । स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालका अनुसार खरिद गरिएको ६० लाख मात्रा खोपमध्ये ४४ लाख मात्रा खोप काठमाडौँ ल्याइएको हो ।
दाहालका अनुसार उक्त खोप रसुवा, सोलुखुम्बु, मुगु, ताप्लेजुङ, बाजुरा लगायत १० वटा हिमाली जिल्लाका लागि उपयोगमा ल्याइनेछ । उनले भने ‘खोप ढुवानीको समस्या हुने भएकाले हिमाली जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेका हौँ । यो खोप छिट्टै वितरण गर्ने तयारी छ ।’ उनले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप लगायत ७ जिल्लामा ४० वर्ष माथिका व्यक्तिलाई पनि उक्त खोप लगाइने अन्नपूर्णसँग बताए । यस्तै अन्य ५५ जिल्लामा ३५ वर्षमाथिका व्यक्तिहरुलाई यो खोप उपलब्ध गराइनेछ ।
यसअघि लक्षित समूहमा परेर पनि खोप लगाउन छुटेका, विद्यार्थी, पर्यटन व्यवसायी, शिक्षक लगायतका पेशाकर्मीहरु यस खोपको प्रथमिकतामा परेको दाहालले बताए । यसअघि कोभिशील्ड २४ लाख ४८ हजार, भेरोसेल ७४ लाख, जोन्सन एन्ड जोन्सन १६ लाख, एस्ट्राजेनेका १७ लाख ७७ हजार ३२० मात्रा खोप नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भदौ ३१ को तथ्यांक अनुसार हालसम्म देशभर ५४ लाख ७३ हजार १५१ जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । यस्तै ६० लाख ५७ हजार १९४ जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशले २/४ घन्टामै राजीनामा दिनुपर्छ’
५८ जिल्लाका एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि,यी हुन
ढुवानीमा १७ करोड अनुदान : उपभोक्तालाई भने नुन किलोको ६० रुपैयाँ
नवलपुरमा ६ बन्दकर्ता पक्राउ
माथिल्लो डिभिजनमा : सहिद स्मारक लिग